घाइते याेद्धालाई गिरफ्तार गर्न एम्बुलेन्स प्रयोग ! | Janakhabar
घाइते याेद्धालाई गिरफ्तार गर्न एम्बुलेन्स प्रयोग !
काठमाडाैं, २८ पुष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दाङ जिल्ला सदस्य इश्वरी पाण्डेलाई एम्बुलेन्समा गएकाे प्रहरी टाेलीले गिरफ्तार गरेको छ । तुलसीपुर ९ शिवपुरबाट अाज बिहान बिरामी बाेक्ने सन्जीवनी एम्बुलेन्समा गएको प्रहरी टाेलीले पाण्डेलाई गिरफ्तार गरेको बताइएको छ । बिरामी बाेक्ने एम्बुलेन्समा प्रहरी जस्तो निकाय राजनीतिक पार्टीका सदस्यलाई गैरजिम्मेवार ढंगले गिरफ्तार गरिएको भन्दै ने.क.पा. दाङले घाेर अापत्ति जनाएकाे छ । देश र जनताको मुक्तिका खातिर लागिरहेको घाइते याेद्धा समेत रहेका पाण्डेलाई गिरफ्तार गरिएको भन्दै सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी, सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र गोकुल बास्कोटालगायत- ..
अखिल क्रान्तिकारीका नेतामाथि प्रहरी दमन- ..
व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुन्ठित नगर
संचारमन्त्री बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न- ..
नेकपाका सुनसरी ईन्चार्ज पौड्याललाई रिहा- ..
बंगलादेश सिदपुर विमानस्थल खुल्ला गर्न- ..
भारतले फेरी सिमाना मिच्यो
ने.क.पा.का ४ नेता पुनः गिरफ्तार
जेलभित्रै कोणसभा !
कालिकाेटको सान्नि त्रिवेणिमा जनयुद्ध- ..
जनयुद्ध दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई- ..